Arena Pro 8500: imfundo kanye Google +
Abashayeli abachitha isikhathi esiningi beshayela, ngenkuthalo ukusebenzisa electronics ngaphezulu, okuyinto lula kakhulu ukuphila umshayeli. Lokhu abalobi ividiyo, amadivayisi Ukuqondiswa kwemikhumbi, kubafuni nekhamera esimenza abone into engemuva. Ngenxa yalokho kokusebenzisa lezi amadivayisi ngesikhathi esifanayo, ungakwazi hang wonke somoya. Nokho, kukhona indlela yokuphuma yalesi simo, ngoba emakethe kukhona kumadivayisi abaningi abangabokuqala iyunithi inhlanganisela ehlanganisa amakhono kumadivaysi amaningana. omele elikhanyayo kakhulu we-Arena kombodevaysov Pro 8500. Lo mshini ihlanganisa kumadivayisi eziningi Akasekho ngisho efika engqondweni lutho, kodwa konke usebenza emihle.
Uyini Arena Pro 8500?
Le modeli ihlanganisa imisebenzi amadivayisi eziningana electronic, okuyilezi:
wesibuko lingena umbono ikhamera;
abezindaba isikhungo shoka mp3 nomsakazo;
The kungenzeka yokugcina - lokhu akulona ihlaya, ngoba DVR Arena Pro 8500 senziwa kwifomu isici 'isibuko'. Isici esiyinhloko umzimba ukuthi akukhona zigxilé esibukweni ngosizo ikhebula bakasilika ibekwe esikhundleni esibukweni njalo. Babhokile Ngokuphikisa zingase zishintshe kakhulu nganoma yisiphi izimoto, kukhona entabeni jikelele, uma asikwazanga ukuthola efanelekayo imoto yakho.
Esikhathini off esibukweni isici wenza indima yakhe. Zibuke esibukweni can ngisho kanyekanye nokusetshenziswa izici ezengeziwe kanye isikrini uthatha wonke ukusebenza endaweni zedivayisi.
Ukugcwalisa Arena Pro 8500 kuhlukile kancane kusukela kumadivayisi efanayo nezinqubo zemininingwane yezinye izinkampani. Ngokuvamile amadivayisi efanayo besebenzisa yesikhulumi Android, kodwa Umakhi waledivayisi bemka classical ngaphezulu. DVR-esibukweni Arena Pro 8500 egijima ohlelweni lokusebenza le-Windows CE. Akukhona evamile ukuba wonke uhlelo lokusebenza for desktop, futhi inguqulo okhethekile kumadivayisi eselula. Kulesi ubuchwepheshe has pluses yayo kanye minuses.
Izinzuzo ohlelweni lokusebenza:
kudivayisi firmware elungiselelwe ukusebenza imisebenzi okuyiwona wona kuhloswe, ngaphandle izinsimbi ezingadingekile kanye kuzwakala, okuyinto overload uhlelo;
avaliwe yesistimu yokusebenza okungenani obala ingozi amagciwane malware;
abambalwa ukuphahlazeka bese ilengela ohlelweni.
uhlelo lokusebenza ngemifanekiso:
ukungakwazi ukwandisa imisebenzi ngokufaka izinhlelo ezengeziwe;
ukusebenza ngaphansi, uma kulinganiswa nokwenu amadivayisi we-Android;
eziyinkimbinkimbi izibuyekezo zesofthiwe uhlelo kanye ibalazwe.
Uhlelo sangaphandle kulula ukuyisebenzisa interface. Lapha ngeke ubone inkinobho uphawu "Qala" isithonjana noma uhlelo. Imenyu, ifomu esikahle kakhulu ukusetshenziswa esibukweni touch.
Idivayisi ewusizo kakhulu, ngaphandle kokungabaza, kuyinto DVR. Njengoba DVR Arena Pro 8500 isebenza kahle. Isiqophi Quality - 720 x 480 pixels 30 ngesekhondi. Angle - 135 degrees. Lokhu kwanele ukumboza wonke endleleni, ngisho nasemgwaqweni. Ebusuku ukuqoshwa kungenzeka, kodwa izinga akuyona eliphezulu kakhulu, ibonakale emkhakheni izibani zokukhanyisa kuphela, kodwa futhi akukho kuka 5 amamitha. Roadside ukuhlukanisa nzima. ilayisense imoto zingqimba ukufunda ngaphandle kwezinkinga.
Ngenxa esakhelwe GPS umamukeli ijubane lokuya kubonakala kule video, kanye izixhumanisi. Lokhu kusiza kakhulu ngesikhathi icala ngengozi.
Inzuzo enkulu yale imodeli iyona ephezulu grade radar umtshina ukuthi unekhono uthole yonke ikhamera kungenzeka:
Ngaphezu kwalokho, sibonga GPS radar umtshina Arena Pro 8500 kungathola umile Ilobhothi ikhamera uhlobo akachaziwe ngumtshiva evamile, futhi ikuvumela ukuba bathole imodeli ongaphakeme-amandla, abonakala kuphela uhla close. Njengoba umsebenzisi arsenal ungazulazula ngokuphepha ithrekhi futhi ungesabi ukuthi ngephutha got ithikithi ababeshayela ngejubane eleqile.
Ukuze kube lula isicupho isixwayiso Arena Pro 8500 has 2 izindlela wokusebenza: ". City" "indlela" futhi Ukusebenzisa lezi zindlela, ngcono ukusebenza kahle kwe umtshina radar kanye ikuvikela ubala, okuyinto edolobheni kungaba iqoqo elikhulu. Isexwayiso radar elise phambili kuyenziwa ngesiRashiya, okuyinto ngokungangabazeki limnandi. Lapho ngisendleleni ngezansi ijubane kuvunyelwa umshini ubonisa isixwayiso esikrinini, akukho zwi ecasulayo yenza.
Ngenxa Arena navigation system Pro 8500 isebenzisa "SitiGid" okuyinto ubhekana abangababi bemisebenzi yaso futhi njalo olusha amabalazwe amadolobha Russian. Ngokunemba kwesibuko Arena Pro 8500 zonke esihle. Lapho ushayela emigwaqweni Friend of Itilosi emaphakathi ayiphule futhi ngaso sonke isikhathi ubonisa indawo efanele emgwaqeni. Satellites apharathasi imizuzwana 15-20. Nakuba engakwazanga enothi lwangaphandle, kule imodeli akukho inkinga ngokuxhumeka uma uvakasha imihubhe overpasses. ukulahlekelwa satellite - ke iyisici ezingavamile lokho kwenzeka ngaphandle ukuthi ngesikhathi ukunyakaza eside Umhubhe ezijulile.
Ngokuphathelene ukunemba amamephu ke kukhona izimangalo encane. Ngezinye izikhathi njengoba itilosi kuyinto ngokuqondile umzila ivaliwe ngenxa ukulungiswa. Kunalokho, kungamandla yesimangalo ohlelweni navigation kuka kudivayisi. Kodwa kukhona imodi zokuqapha ukucinana isimo sezimoto. Lokhu kudinga i-Internet, okuyinto kule imodeli Kwenziwa kuphela lapho uxhumeke ngomakhalekhukhwini noma smartphone. Uxhumano kufanele kube "bluetooth" futhi kumelwe nakanjani babe ukusekela ukufinyelela ku-intanethi kule smartphone. Le modi isebenza kahle, kodwa ngezikhathi ezimatasa akukho-akukho futhi kuyoholela ukulayishwa imishini emgwaqweni.
Engemuva Buka Ikhamera
Okufakwe ne esibukweni has a lingena umbono ikhamera, okungase uxhumekile bese efakwe emotweni yakho. Le khamera olunezintambo okuyinto ubhekana kahle nenjongo yaso - kuyasiza lapho yokupaka in reverse. Ngo 8500 Arena Pro Imodi ezingemuva umbono ikhamera luyasetshenziswa ngendlela efanayo njengoba kwamanye amadivayisi efanayo, kanye ukusebenza evamile ezinye imishini. Ikhamera ixhunyiwe ku-isibani emuva, futhi umfanekiso screen livela ngokuzenzakalelayo.
Uma wayefisa, kungenziwa kalula ixhunywe kwesinye imodeli ikhamera kudivayisi, isibonelo, afakwa number plate Uhlaka noma elinye ilungu lomzimba. Ngakho ungaqhubeka ukusebenzisa ukusebenza ezihlongozwayo.
Ukuze usethe lesi imodeli umbhalisi esibukweni, esibukweni kwanele ukushintsha abasebenzi elula intambo ngaphansi kwesikhumba imoto. Ngokuqondile umsebenzi kubalulekile ukuxhuma ikhebula eyodwa kuphela ehlanganisa amandla ividyo kwikhamera. Uma idivayisi ixhunyiwe kahle, uzolayishwa ngokuzenzakalelayo ngemuva kokuqala injini futhi alobe DVR imodi. Isikrini sakho kungacinywa, futhi uzoba uzibuka esibukweni ngaphandle kokuphazamiseka kungakhathaliseki ukuthi.
Iinsetjenziswa Arena Pro 8500 eshiya umuzwa omuhle ukusetshenziswa. Yebo, kudivayisi ekahle namanje kude, futhi onobuhle avele uqabula futhi mnandi, kodwa oyedwa kuleli esibukweni akususi - anakho isithwebuli radar okugcwele ungakwazi ukuxwayisa umshayeli hhayi kuphela ezilotshwe ikhamera data base, kodwa futhi kwamanye izithiyo endleleni.
Kwaphela isikhathi eside eziningi abalandeli wavela Arena Pro 8500. Izibuyekezo omuhle ngokuphelele, futhi lena ubufakazi engcono ukuthi umenzi akusho ngamabomu it emakethe. Leli thuluzi kungenziwa ukuncoma ngokuphepha ukuthenga bona, kodwa futhi njengesipho Ungumuntu omuhle.
Ukumiswa Intulo. Izici, ukufakwa, ukulungiswa
Car "Sobol" nge 4x4 wheel drive: ukubuyekezwa abanikazi
Car "Ural-5557": incazelo, izici
MTZ-80 tractor: ezibekiweko lobuchwepheshe, izingxenye
Izithasiselo for amafutha: ukubuyekezwa. Zonke izinhlobo izithasiselo for uwoyela motor
Inkosi ngamakha Guerlain Shalimar. Izibuyekezo perfume
Yini itches ngakwesokunene - uphawu, kuqinisekiswa yezokwelapha
Indlela babhale indaba ekhuluma Temibhalo: isakhiwo kanye nohlelo
Kuyini insemination njengoba inqubo, yini kusebenta yayo? Izibuyekezo
Biography Andrey Malakhov - stylish kakhulu TV zaziziningi "Okokuqala kwesiteshi"
Sokuqonda USSR. Njengoba isifinyezo USSR imele?
Yini zingenziwa ibhodlela? imibono Interesting ekhaya engadini kanye
Ford Escape: ukuthi sazuza kusukela uMalume Henry
Endocrinol: izibuyekezo zakho, izincomo
I-lymph node iye yavutha ngaphansi komhlathi: izizathu kanye nokwelashwa
Yakha isithombe Retro: ingubo Mods 50s